Ama-slide webhola eliboshwe amathathu aqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, anezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuhambisana nokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll. Kubathuthukisa. Ukucaciswa kwesilayidi sebhola elinamabhola amathathu kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
Dweba i-Wardrobe Hardware Hardware Ama-Slides Counder Trains Ama-Slides ane-Addmith ane-Addmith Hardware ene-Craft enhle kakhulu futhi intengo.AdDith esebenza ngemali esebenzayo inikezela ngezinsizakalo zohlelo lwe-Hinge lwe-Hinge kanye ne-One-Stop Horde Service ye-Hardware yefenisha.
I-Slide Emithathu Yebhola Elibolayo
Kukhiqizwe ubuchwepheshe bethu obuthuthukisiwe kuqinisekisa isikhathi eside sokuphila kwe.
1. Singakwazi kabanzi ngenkampani yakho nomkhiqizo oyinhloko?
Singathola amasampula kuwe?
Inzuzo ye-2.Price: Sinikezela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamaphoyinti wentengo ahlukahlukene azokwenza kube lula kuwe ukwamukela izidingo zobuso obuhlukahlukene nabakhona amakhasimende akhona.
Isampula ye-4.Free: Sinikeza amasampula wamahhala asuselwe kwizidingo zakho ezithile zokuhlola ikhwalithi yemikhiqizo yethu. Kubalulekile kithi ukuthola lokho okudingayo ngqo.
Blue Zinc, mnyama
1. Kwenziwe ngensimbi egqamile ebandayo, i-galvanization ye-Craft Craft, i-Double-Laser Survate Rearing Reviving yokudonsa futhi hhayi ukugqwala kalula.
2. Kusetshenziswa izinto zokuqina ezigcwele zesilayidi sekhabethe, ama-forb amathathu enza ukuthi ujantshi wangaphandle futhi ongaphakathi unamandla.
3. Ibhola lensimbi eqinile eqinile, ukwakhiwa okuphelele okuthule, ukuncishiswa komsindo buthule, ukuze impilo nehhovisi kube ntofontofo.
4. Ngokuhlola okuqinile kwekhwalithi, kungadonswa kalula izikhathi ezingaphezu kuka-50 000, futhi kungasekela izinto ngesisindo esingaphansi kwama-25 kg kanye nengxenye yesilayidi sosayizi noma ngaphezulu kwe-25KG.
5. Okuningi komnotho uma kuqhathaniswa nohlobo oluthambile lokuvala, kanye nezinto ezingcono zenza umphumela ongcono wokuthwala kunezinye izinhlobo nobukhulu besilayidi